ပန်းသီး, Google နှင့် Microsoft က: အားနည်းစာဝှက်စနစ်အတွက်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေပေးနိုင်ပါတယ် - သတင်း Rule
ပန်းသီး, Google နှင့် Microsoft က: အားနည်းစာဝှက်စနစ်အတွက်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေပေးနိုင်ပါတယ်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ပန်းသီး, Google နှင့် Microsoft က: အားနည်းစာဝှက်စနစ်အတွက်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေပေးနိုင်ပါတယ်” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com တနင်္လာနေ့တွင် 23 နိုဝင်ဘာလများအတွက် 2015 12.42 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ပန်းသီး, Microsoft က, Google က, Samsung က, တွစ်တာ, Facebook နှင့် 56 အခြားနည်းပညာကုမ္ပဏီများက "မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေအားဖြင့်ခေါင်းပုံဖြတ်" မည်ဖြစ်ကြောင်းဟူမူကားအားနည်းစာဝှက်စနစ်တောင်းဆိုမှုများကိုငြင်းပယ်အတူတကွပူးပေါင်းခဲ့ကြပြီ.
ပြီးနောက် "ဆိုသွင်းပြီးလူတိုင်းအတွက်တစ်သွင်းပြီးက" Apple ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Tim Cook ကရဲ့တောင်းဆိုမှုများ, ပြန်ကြားရေးနည်းပညာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကောင်စီ, သောကိုယ်စားပြုတယ် 62 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအကြီးဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများ, ကပြောပါတယ်: "Encryption ကိုငါတို့သည်ငါတို့၏ဘဏ်စာရင်းဖျန်မှရာဇဝတ်ကောင်ရပ်တန့်ဖို့နေ့စဉ်မှီခိုအားလုံခြုံရေး tool တစ်ခုဖြစ်သည်, အန္တရာယ်ရှိတဲ့ Hack ခြင်းဖြင့်ကျော်သိမ်းယူခံရခြင်းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားများနှင့်လေယာဉ်ကာကှယျမှ, နှင့်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်။ "
စာဝှက်စနစ်အပေါ်မှာဆွေးနွေးငြင်းခုံ, သောမလုံခြုံဖြစ်လိုနီးပါးတိုင်းထုတ်လွှင့်အသုံးပြုတဲ့အင်တာနက်ရဲ့အခြေခံမူဖြစ်လာနှင့် ပို. ပို. သူတို့အားဖြစ်ပါတယ်, ပဲရစ်မြို့ပေါ်မှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးဖြစ်ပွါးခဲ့သည်.
အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကောင်စီရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်, ဒင်း Garfield, ကပြောပါတယ်: "တိုးတက်လုံခြုံရေး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူအားနည်းစေလုံခြုံရေးရိုးရိုးအဓိပ္ပာယ်လုပ်မထားဘူး။ "
Related: Tech မှစက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုများစာဝှက်စနစ်အားနည်းစေမယ်လို့မူဝါဒများရှောင်ရှားရန်အမေရိကန်တိုက်တွန်း
end-to-end encrypted ဆက်သွယ်ရေးကိုသာပေးပို့သူနဲ့လက်ခံသူသတင်းစကားရဲ့ contents ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ဆိုလို, တစ်ဦးအားနည်းချက်မှာထောက်လှမ်းရေးန်ဆောင်မှုတင်တော်မူသောအစိုးရများပွောဆို.
အစိုးရများ, ဗြိတိန်၏အပါအဝင်, စာဝှက်စနစ်ရဲ့အမျိုးမျိုးသောပုံစံများ powering လုံခြုံရေးဆော့ဖ်ဝဲတွင်း - - လုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုဆက်သွယ်ရေးကြည့်ရှုနိုင်သည့်မှတဆင့်ဖန်တီးထားရမည် backdoors ကြောင်းပြောဆိုကြပြီ.
Garfield ကပြောပါတယ်: "စာဝှက်စနစ်အားနည်းခြင်းသို့မဟုတ်ကောင်းသောယောက်ျားတွေအားဖြင့်အသုံးပြုမှုအတွက်စာဝှက်ထားတဲ့ devices နဲ့ဒေတာမှ backdoors ဖန်တီးခြင်းတကယ်တော့မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေအားဖြင့်ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရဖို့အားနည်းချက်များဖန်တီးမယ်လို့, သောနီးပါးဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုဖြတ်ပြီးလေးနက်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဘဏ္ဍာရေးထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်။ "
ယခင်ကစာတိုပေးပို့ရေး app များကို encrypt လုပ်ထားတဲ့သူ့အကြံပြုချက်များကိုကျော် "မိုဃ်းတိမ်ကို cuckoo ပွညျ၌နထေိုငျ" အဖြစ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ဖော်ပြခဲ့ကြပါပြီလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူများကပိတ်ပင်ခဲ့ရပါမည်.
နည်းပညာကုမ္ပဏီများအစိုးရများနှင့်လုံခြုံရေးအေဂျင်စီများ encryption ကိုချိုးဖျက်နိုင်သည့်တဆင့်နည်းလမ်းပါဝင်ရန်ငြင်းပယ်သင့်ပါ, ဒါကြောင့်စာဝှက်စနစ်တစ်ခုကို software ကို အသုံးပြု. မှအကြမ်းဖက်သမားသို့မဟုတ်အခြားအုပ်စုများကိုရပ်တန့်ရန်အလွန်ခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်အဖြစ်ကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းသာအပ် impact မယ်လို့.
စာဝှက်စနစ်အပေါ် The Guardian ကအမြင်: ထိုပြဿနာကိုသိသာသော်လည်းအဖြေနေတုန်းပဲတွေ့ရခဲသောဖြစ်ပါသည်
25026	0 Adobe က, အက္ခရာ, ပန်းသီး, အပိုဒ်, BlackBerry ကိုကော်ပိုရေးရှင်း, စီးပွားရေး, computing, Dell က, encryption, Facebook က, Google က, Hewlett-Packard, HTC က, IBM က, အင်တာနက်ကို, Lenovo က, Microsoft က, Motorola က, Panasonic က, Samsung က, ရှမွေလသည် Gibbs, Software များ, Sony က, နည်းပညာ, နည်းပညာကဏ္ဍ, တွစ်တာ, Yahoo က
← microsoft Lumia 950 The Verge အားဖြင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း [ဗီဒီယို] Apple က TV ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: စတုတ္ထမျိုးဆက် streaming များ box ကိုအပြည့်အဝဖုတ်မဟုတ်ပါဘူး →